Dagaal dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug
October 22, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. [Sawirka: Puntland Mirror]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa galabta oo Sabti ah dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in labada dhinacba ay adeegsanayaan hubka culus iyadoo dhawaaqa qoryaha laga maqlayo guud ahaan magaalada.
Dagaalka cusub ee galabta ayaa daba socday dagaalo maalmihii lasoo dhaafay u dhaxeeyay labada dhinac.
Waxaa jira khasaare dagaalka ka dhashay, balse Puntland Mirror si madax-banaan uma faahfaahin karo khasaaraha.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay dagaalka u dhaxeeya ciidamada kala taageersan Puntland iyo Galmudug tan iyo markii uu qarxay bishii hore.